Inini Ingqungquthela Yakho Elandelayo E-inthanethi? | Martech Zone
NgoMsombuluko, Ephreli 26, 2010 NgoLwesithathu, Novemba 5, 2014 Douglas Karr
Ezinye zezinkampani engisebenza nazo, ikakhulukazi ezamabhizinisi nezamabhizinisi (i-B2B) zibona imiphumela emangazayo futhi zibuya ekutshalweni kwemali kusetshenziswa imicimbi ebonakalayo kanye nohwebo. Kade ngifuna ukuthumela mayelana nokukhangiswa kwemicimbi ebonakalayo isikhathi esithile, futhi ngisanda kukhuluma nayo Ukungabi nabulungisa.
I-Unisfair inikeza iSoftware ephelele njengengxenyekazi Yesevisi, kufaka phakathi isoftware yenkomfa, isoftware yokusakaza iwebhu, ingxoxo eku-inthanethi, ukuqoqwa kokuhola kanye namathuluzi wokubika. Ngokungafani nengqungquthela yendabuko lapho kunzima ukulandela abazile, ingqungquthela ebonakalayo ikuvumela ukuthi ulandele yonke into! Ngaphezu kwezindleko zokuncishiswa komholi, izinkampani eziningi zamukela izingqungquthela ezibonakalayo ukuze zibhekele imvelo futhi.
Ocwaningweni olwenziwe ekuqaleni konyaka, Ukungabi nabulungisa kutholakale amaphesenti angama-48 wabakhangisi abahlela ukwanda ukusetshenziswa kwabo kwemicimbi ebonakalayo ngonyaka ozayo. Izizathu ezithandwa kakhulu zokwamukela imicimbi ebonakalayo yilezi nweba ukufinyelela kwezentengiso (Amaphesenti angama-32) futhi khulisa ivolumu yokuhola (Amaphesenti ayi-15).
I-American Business Media ibike ukuthi ama-75% wabenzi bezinqumo zamabhizinisi okukhulunywe nabo bathe bahambele imicimbi emithathu noma ngaphezulu yeWebhu ezinyangeni eziyi-12 ezedlule. I-Marketing Sherpa ibike ukuthi imihlangano ebonakalayo inyuke ngama-37% njengomthombo wolwazi engxenyeni yokuqala yonyaka ka-2009. Izabelomali zokuhamba eziqinile, ukuqhuma kwezinkundla zokuxhumana nabantu kanye nokufuna amathuluzi amasha wokukhiqiza kuhlangene ukukhuthaza lokhu kukhula okusheshayo.
I-Ariba ingenye ye-Unisfair izindaba zokuphumelela. I-Ariba yinkampani yokuphathwa komhlaba wonke eyabona ukuthi umnotho uzoba nomthelela kubantu abaya engqungqutheleni yabo elandelayo. Besebenzisa ipulatifomu i-Unisfair, bathuthele ingqungquthela yabo ngokomzimba ku-inthanethi futhi bazuza kakhulu, kwaholela kwababhalisile abangu-2,900 1,618, ababekhona abangu-4,000 5,200, ukulandwa okungu-538, ukuvakashelwa kwamadokodo angu-1,078 XNUMX, izingxoxo ezingama-XNUMX ezaqalwa kanye nemiyalezo engu-XNUMX XNUMX! Lokho ukuzibandakanya okuhle!
Amathiphu ama-3 Wokumaketha Komcimbi Obonakalayo
UJoerg Rathenberg, umqondisi omkhulu wezokukhangisa we-Unisfair, unikeze ngamathiphu alandelayo wokukhangisa ngemicimbi ebonakalayo:
Ngaphambi komcimbi: Qala ukulungiselela kusenesikhathi, njengoba nje ubungayenzela ingqungquthela yomzimba noma umcimbi. Qinisekisa ukuthi unohlelo lokukhiqiza izethameli oluzwakalayo. Yiba nobuciko futhi uzame ukwenza isipiliyoni sihlanganyele ngangokunokwenzeka. Isibonelo, thumela amaphakheji womcimbi anempahla yengqungquthela isib. Izikibha kwababhalisile uma ukhokhisela umcimbi. Nikeza izingwegwe zokuxhumana nabantu ezivumela ababhalisile ukuthi babelane ngesimemo nemiphakathi yabo. Qiniseka ukufaka okuqukethwe okuthokozisayo nezipikha ezingadonsa isixuku. Okuqukethwe okuhle kuyisihluthulelo somcimbi obonakalayo ophumelelayo! Qinisekisa ukuthi ababhalisile banesikhathi sokuqala emakhalendeni abo wokubuka.
Ngesikhathi somcimbi: Chunk amaseshini akho abe yizicucu ezincane - ngesikhathi semicimbi ebonakalayo, abantu abanaso isikhathi sokunaka esifanayo nesabahambeli bomzimba. Sithole ukuthi ama-20 min ubude obude kakhulu. Qiniseka ukuthi izipikha zakho ziyatholakala ezingxoxweni endaweni yokuphumula yokuxhumana. Nikeza ngamathuba amaningi wokuxhumana, ukuxhumana nokuxhumana. Sebenzisa izinhlolovo nokuhlanganiswa kwemidiya yezenhlalo ukudala i-buzz nokuthatha izinga lokushisa lomcimbi wakho. Imibiko yesikhathi sangempela izokutshela ukuthi kwenzekani. Sebenzisa imilayezo ukushayela abantu lapho isenzo sikhona. Nikeza izikhuthazi kwabahambele iqhaza, njengemincintiswano noma imidwebo.
Ngemuva Komcimbi: Imicimbi ebonakalayo ikhula ngokushesha ibe amapulatifomu wokuzibandakanya ahlala ekhona. Konke okuqukethwe kwakho, kufaka phakathi i-Q & A, kufanele kutholakale ngokushesha lapho kufunwa ngemuva kokuthi ingxenye ebukhoma iphelile. Imvamisa cishe ababhalisile abangama-50% babonakala bukhoma. Qiniseka ukuthi uthola amanye ama-50% ukuba abe khona nawo - kamuva nje. Sebenzisa amathuluzi afana ne-Unisfair's Engagement Index ukukala izethameli zakho ngokususelwa kubalo lwabantu, imisebenzi kanye nezinto abazithandayo futhi unikeze lolu lwazi eqenjini lakho ukuze lilandelwe. Imicimbi ebonakalayo inenzuzo yokuthi uzokwazi konke okwenziwe ngumuntu obekhona lapho esendaweni yakho. Nikeza lonke lolu lwazi olucebile kuthimba lakho lokuthengisa ukuze uqiniseke ukuthi bangaqhubeka nengxoxo.
Abanye abadlali emakethe kukhona I-InXpo, ON24, Ukuvezwa2, Indawo Yesibili futhi I-6Connex. Angikakulungeli ukuyeka imicimbi ebonakalayo - ngithola inani elikhulu kakhulu ekuxhumaneni nabanye abakhona. Njengoba izindleko zenkomfa zingaqala ku- $ 50k, noma kunjalo, ingqungquthela ebonakalayo kufanele. Uzoheha abantu abaningi kangaka abangamathemba amahle kepha begwema izindleko noma ukuphazamiseka kohambo.
Tags: Ukuhlela Isenzakaloizenzakaloingqungquthela onlineengenabulungiswa
I-WordPress igqekeziwe? Izinyathelo Eziyishumi Zokulungisa Ibhulogi Yakho